Canary ကျွန်းစုအနီးတွင်လေယာဉ်တစ်စင်းနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးလူ ၅၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » Breaking ခရီးသွားသတင်းများ » Canary ကျွန်းစုအနီးတွင်လေယာဉ်တစ်စင်းနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးလူ ၅၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်
ဥရောပသတင်းများ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ရာဇဝတ်မှု • သတင်း • လုံခွုံမှု • စပိန်အထူးသတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • သတင်းမျိုးစုံ
စပိန်ကျွန်းစုအနီးအာဖရိကတွင်လေဖောင်းထောင်းကပ်ဘေး၌လူတစ် ဦး သာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး တည်းသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
လူ ၅၀ ကျော်သေမည်ကိုကြောက်သည်။
စပိန် Canary ကျွန်းများမှ ၁၃၅ မိုင်ခန့်အကွာ Atlantic သမုဒ္ဒရာအတွင်းအာဖရိကမှပျံတက်လာသောလှေတစ်စင်းနစ်မြုပ်မှုကြောင့်လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်ဟုစပိန်၏ Maritime Rescue Service ၏အဆိုအရသိရသည်။
အသက် ၃၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်တစ် ဦး တည်းသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူဖြစ်ပြီးကြာသပတေးနေ့ကနစ်မြုပ်သွားသောနစ်မြုပ်နေသည့်လှေငယ်မှ ၅၃ ဦး ကိုအာဖရိကမှထွက်ခွာသွားသည်။
ကုန်သည်သင်္ဘောတစ်စင်းသည်သင်္ဘော၏တောင်ဘက်ကိုစောစောစီးစီးတွေ့ခဲ့တယ် နေရီကျွန်းစု စပိန်အရေးပေါ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းသတိပေးခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးသည်နစ်မြုပ်နေသောယာဉ်အားသေဆုံးသူ၏အမျိုးသားနှင့်သူမ၏ဘေးတွင်သေဆုံးနေသောအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွယ်ကပ်နေသည်ဟုကယ်ဆယ်ရေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။
အဲဒီအမျိုးသမီးကို Gran Canaria ကျွန်းပေါ်က Las Palmas ဆေးရုံကိုလေယာဉ်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်ဒုက္ခသည်များသေဆုံးရခြင်းသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာဒေသတွင်အဖြစ်များသည် အာဖရိကအနောက်ဘက်ကမ်းခြေ စပိန်၏ Canary ကျွန်းများနှင့်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိသင်္ဘောပျက်များသည်အတည်ပြုရန်ခက်သည်။ သေဆုံးသူအများစု၏ရုပ်အလောင်းများကိုပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ကုလသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအေဂျင်စီ၏အဆိုအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ပထမခြောက်လအတွင်းစပိန်ကျွန်းစုများသို့အနည်းဆုံးလူ ၂၅၀ သေဆုံးခဲ့သည်။
UFO မြင်ကွင်းများ - အမည်မသိသူအားဖမ်းရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ ...
ကျန်းမာရေး ကနေဒါသတိပေးချက်- လက်သန့်ဆေးများသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်ပါ။
ပီရူးနိုင်ငံ၌ချောက်ကမ်းပါးမှဘတ်စ်ကားတစ်စီးပြုတ်ကျမှုကြောင့် ၃၂ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၀ ဦး ဒဏ်ရာရ
စိန့် Kitts & Nevis မှခရီးသွားများအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ငြင်းပယ်
Jean-Michel Cousteau Resort၊ Fiji မှကြိုဆိုပါသည်။
အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အ ဦး မှ Pop-up ရောင်းချသူများကိုပြသရန် ...
Mobile Game မှတဆင့် DC Heroes and Villians များကိုစုစည်းပါ
အားလပ်ရက်အာမခံချက်နှင့်အတူခရီးသွား ဦး ဆောင်ဖိနပ်များ Resorts
Air Astana မှကာဇက်စတန်မှ Maldives သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ
အမ်စတာဒမ်-စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်း KLM ကိုသာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့သည်
ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၃၃% ကသူတို့ဘယ်တော့မှမရကြဘူးလို့ပြောကြတယ်။
“ သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုမွေးမြူပါ” ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်ကမည်သို့ကူညီလိမ့်မည်နည်း။
နောက်ထပ် Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura ...
အလို! ဥရောပမှသင်၏ Lufthansa လေယာဉ်ကိုကြိုတင်မှာထားလျှင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ဂျမေကာခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးကခရီးသွားလုပ်သားများအားခေါ်ယူရန်တိုက်တွန်းသည်။
St. Kitts & Nevis: အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကိုစက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်အဆုံးသတ်သည်
ခရီးသွားတစ် ဦး သည်ဗိုက်ဆာသောဝက်ဝံအားသတ်ဖြတ်။ သတ်ဖြတ်။ ...
ယခု Flydubai ပေါ်တွင် Budapest မှ Dubai သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ
Ryanair သည် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံအတွက် အကြီးဆုံးအချိန်ဇယားကို ကြေညာခဲ့သည်...
တန်ဇန်းနီးယားရှိမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသော Black Rhino ကာကွယ်မှုသည် ...
Puerto Rico ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ယခုတိုးတက်နေသည်